Ndị isi njem nlegharị anya LGBTQ+ na -ezukọ n'Atlanta maka 'njikọta ezinụlọ'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Ndị isi njem nlegharị anya LGBTQ+ na -ezukọ n'Atlanta maka 'njikọta ezinụlọ'
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • LGBTQ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbakọ Global IGLTA bụ nnabata a nabatara nke ọma maka ndị bịaranụ, ndị kerịtara ibe ha akụkọ mkpali ha banyere ntachi obi ọkachamara, yana echiche obi ike ha maka ihe ọhụrụ, nchekwa na ntinye n'ime mpaghara njem LGBTQ+.
Mgbakọ ụwa nke 37 nke IGLTA bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, yana ihe karịrị 400 LGBTQ+ na ndị ọkachamara njem na -anọchite anya mba 27 na -ezukọ n'Atlanta.
Enwere ebe a na -azụ ahịa/onye na -ebubata ya, ọtụtụ ụbọchị agụmakwụkwọ, mkpali na ịkparịta ụka n'Ịntanet, yana onye nchịkọta ego IGLTA Foundation, Voyage.
Achọrọ akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ule COVID-19 na-adịghị mma maka nnabata na mmemme mgbakọ IGLTA niile.
Mgbakọ zuru ụwa ọnụ nke 37 nke IGLTA bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, yana ihe karịrị 400 LGBTQ+ na ndị ọkachamara njem na -anọchite anya mba 27 na -agbakọ. Atlanta maka ebe a na -azụ ahịa/ndị na -ebubata ya, ọtụtụ ụbọchị agụmakwụkwọ, mkpali na ịkparịta ụka n'Ịntanet, yana ego IGLTA Foundation, Voyage.
Achọrọ akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke ma ọ bụ nnwale COVID-19 na-adịghị mma maka ịnabata mmadụ niile IGLTA convention ihe omume na Atlanta, na nsonaazụ ya bụ nnabata dị mma nke ukwuu maka ndị bịaranụ, ndị kerịtara ibe ha akụkọ mkpali ha banyere ntachi obi ọkachamara, yana echiche obi ike ha maka ihe ọhụrụ, nchekwa na ntinye n'ime mpaghara njem LGBTQ+.
Onye isi oche/onye isi oche IGLTA John Tanzella
"Anyị na -ekwukarị IGLTA netwọkụ ụwa na -adị ka ezinụlọ, n'ihi na njikọ azụmaahịa na -aghọ nke onwe kemgbe ọtụtụ afọ, "Onye isi oche/onye isi oche IGLTA John Tanzella kwuru. “Mana nnọkọ a bụ ihe pụrụ iche n'ezie ka ọnwa 18 gasịrị. Ị nwere ike nwee agụụ maka njem LGBTQ+ na nnọkọ ọ bụla, ọ na -enyekwa ume maka nzukọ azụmaahịa ọ bụla na saịtị. Obi dị anyị ụtọ na anyị na -ebute ụzọ n'ịrụgharị ụlọ ọrụ anyị. ”
N'etiti ọtụtụ ihe kpatara ya:
Ememe mmeghe na Aquarium Georgia, ebe ndị ọbịa na-emekọ ihe ọnụ dị ka shark whale, ụzarị na nduru mmiri n'oké osimiri na-efegharị n'azụ ha na tank dị nde 6.3 (lita nde 23.8).
IGLTA Foundation Think Tank na King & Spalding nke jikọtara ndị isi sitere na ngalaba niile nke njem njem na otu LGBTQ+; Mkparịta ụka a lekwasịrị anya na njikọta nke njem LGBTQ+ yana nha nha nha, ụdị dị iche iche na ntinye, yana otu esi alaghachi dị ka ụlọ ọrụ siri ike na -anabata ndị ọzọ. Akụkọ nnọkọ na -abịa.